‘झुन्डिन नमिल्ने हिरासतमा कसरी आत्महत्या ?’- समाचार - कान्तिपुर समाचार
वैशाख ७, २०७६ पर्वत पोर्तेल
बिर्तामोड — इलाका प्रहरी कार्यालय बिर्तामोडको हिरासतमा किशोरको मृत्यु भएको प्रकरणमा मानव अधिकारकर्मीले आत्महत्या नभई प्रहरी यातना नै कारण रहेको औंल्याएका छन् । घटनास्थल अवलोकनपछि उनीहरूले शुक्रबार यस्तो निष्कर्ष निकालेका हुन् ।
मेचीनगर–६ का १५ वर्षीय किरण कार्कीढोलीको हिरासतमा मृत्यु भएको घटना सार्वजनिकपछि मानव अधिकारसम्बद्ध निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले घटनास्थल अवलोकन गरेको थियो ।
टोलीका अनुसार प्रहरीले किशोर झुन्डिएको भनेको हिरासतको शौचालयमा झुन्डिन सक्ने सम्भावना नै देखिँदैन । ‘घटना प्रकृति हेर्दा झुन्डिने अवस्थै छैन, यातनाबाटै बन्दीको मृत्यु भएको हुनुपर्छ,’ मानव अधिकारकर्मी विष्णु खरेलले भने । प्रहरीले धाराको टुटीमा सर्टको पासो बनाएर झुन्डिएको दाबी गरेको छ । ‘प्लास्टिकको टुटी छ, धारा पनि होचो छ, यस्तो ठाउँमा मान्छे कसरी झुन्डिन सक्ला ?,’ खरेलले भने ।
उनका अनुसार घटना वैशाख १ गते राति करिब २ बजे भएको देखिन्छ । १८ वर्ष मुनिकालाई अन्य घटनाका आरोपी राख्ने हिरासतमा सँगै राखेर अनुसन्धान गर्न नपाइने कानुनी प्रावधानसमेत प्रहरीले उल्लंघन गरेको टोलीले जनाएको छ ।
घटनालगत्तै प्रहरीले राति करिब साढे ३ बजेतिर मुचुल्का गरेको थियो । बिर्तामोड २ का वडाध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र अर्जुनधारा १० का वडाध्यक्ष बलदेव गोम्देनले मुचुल्कामा हस्ताक्षर गरेका छन् । ‘बालक झुन्डिएरै मरेको हो भने रातारात किन मुचुल्का भयो ?,’ अधिकारकर्मी खरेलले भने, ‘प्रहरीलाई शंका गर्नैपर्ने अवस्था अरू पनि धेरै देखिन्छ ।’
प्रहरीले किरण भारतको पानीट्यांकी निवासी रहेको, उमेर १९ वर्ष रहेको र बेवारिस रहेको करार गर्दै जनप्रतिनिधिको रोहवरमा मुचुल्का गरेको थियो । अधिकारकर्मीका अनुसार पक्राउ गर्नुअघि अदालतको स्वीकृति चाहिन्छ । तर, किरणलाई स्वीकृतिबेगर नै हिरासतमा राखिएको थियो । उनका अभिभावकलाई खबर नै गरिएन ।
परिवारका सदस्यबिनै सर्जमिन मुचुल्का गरिएको थियो । दलित अधिकारकर्मी टीकाराम मंग्रान्तीले भने, ‘मृतकका बुबा रमेशलाई प्रहरीले अपहरण शैलीमा बोलाएर लगेको छ । प्रहरी कार्यालय पुर्‍याएर मुचुल्कामा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गर्न लगाइएको देखिन्छ ।’ रमेशलाई उद्धृत गर्दै मंग्रान्तीले भने, ‘कागजमा के लेखिएको थियो, पढेर पनि सुनाइएको छैन ।’ घटनाको प्रत्यक्षदर्शीलाई मानव अधिकारकर्मीले संरक्षणमा राखेका छन् । मानव अधिकारवादीहरूसँग उनले भने, ‘किरणको मृत्युको कारण आत्महत्या हैन, फ्रहरी यातना नै हो ।’
यसैबीच मानव अधिकारकर्मी र दलित अधिकारकर्मीले शुक्रबार छुट्टाछुट्टै वत्तव्य सार्वजनिक गर्दै उच्चस्तरीय छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र मृतक परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सम्बद्ध निकायसँग अपिल गरेका छन् । उनीहरूले प्रहरी नायब उपरीक्षक सुवास खड्कालाई तत्काल निलम्बन गर्नसमेत माग गरेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले घटना अनुसन्धान गर्न डीएसपी महेन्द्र श्रेष्ठ संयोजक रहेको तीन सदस्यीय टोली गठन गरेको छ । एसपी दिनेश मैनालीले किशोरले आत्महत्या नै गरेको दाबी गर्दै अनुसन्धान टोलीले घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्ने जनाए । ‘बालकले आत्महत्या गरेको सबै प्रमाण हामीसँग छ,’ उनले भने ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०८:१७
वैशाख ७, २०७६ अभि सुवेदी
कान्ट त्यसैलाई ‘सब्लाइम’ भन्छन् क्यारे । टिभीमा भयानक दृश्य देखिनु स्वाभाविक हो । यो मानिस सशरीर हताहत भएको दृश्य थिएन । यो नरसंहार गर्ने मानिसको करतुत वा कुनै आतङ्क पनि थिएन । यो कथा एउटा कथिड्रलको हो, जसको उपस्थिति मानव सिर्जना– अमूक काव्य, सङ्गीत वा चित्रकला जस्तो हो, जसलाई सबै धर्म र विश्वास लिएकाहरूले मानवताको साझा रचनाको रूपमा मानेर आएको इतिहास छ ।
मलाई २०७२ सालको महाभूकम्पमा भत्केका र चिरा परेका यस्तै प्राचीन कलात्मक कलेवरहरूको सम्झना भयो । नोत्रदाम भन्दा पनि कतिपय पुराना सांस्कृतिक सम्पदा, परम सुन्दर काष्ठकलाका रचना, पत्रेदार पेगोडाका छाना अनि प्रस्तर मूर्तिहरू त्यस महाप्रलयमा क्षतिग्रस्त भए, तिनको जीवन्त तस्बिर मनमा आए । भूकम्प गएको भोलिपल्ट भक्तपुर दरबार परिसरमा गएर आफूले खिचेका र मेरा विद्यार्थीले खिचेका म सहितका चित्रहरूमा एउटा निर्वैयक्तिक हुन नसकेको पीडाका अभिव्यक्ति देखेँं ।
जब यस्ता सम्पदा नष्ट हुन्छन्, त्यसबेला सबैमा सिर्जनशील चिन्ता जन्मिने रहेछ । त्यो हो, अब यी सबै फेरि पुरानै आकारमा आउनेछन्, विनाशमा झन् उजागर हुनेछन् भन्ने मानव सिर्जनाको विश्वास र मनस्थिति । त्यो मनस्थितिभन्दा अर्को पनि एउटा तर्क छ, जुन नोत्रदामलाई आगोले खाएपछि अंग्रेजी र फ्रान्सेली पत्रिकाहरूमा पढेंँ । म यहाँ ब्रिटेनको यता पनि आइबस्ने द इकोनोमिस्ट (१७ अप्रिल २०१९) मा लेखिएका केही विश्लेषणका सार राख्न चाहन्छु । ती विचार मलाई अत्यन्त सटिक र वाचाल लागेकाले यहाँ राखेको हुँ ।
द इकोनोमिस्ट लेख्छ, ‘५० वर्षअघि बीबीसी शृङ्खलामा कला समीक्षक केनेथ क्लार्कले भनेका थिए– कला के हो भनेर कसैले सोधे म भन्छु, मलाई थाहा छैन । तर म यसलाई देखेपछि भने चिन्न सक्छु । अहिले म नोत्रदामलाई देख्दैछु । म यसलाई चिन्छु ।’ क्लार्कले भनेजस्तो बस् त्यत्ति हो त कला चिन्नु ? म आफैं पनि कला समीक्षा गर्छु । मलाई लाग्छ, देख्न सकिन्छ, सजिलै परिभाषा गर्न सकिंँदैन, कला ।
भक्तपुर परिवेशमा मैले आफैं नाटकहरू लेखेका भग्न भएका थलामा गएपछि मेरा विद्यार्थीले सोधेका थिए, ‘के भन्नुहुन्छ, यी भत्केका सम्पदाबारे ?’ मैले पनि त्यस्तै भनेको थिएँ, ‘म अहिले यिनलाई देख्दैछु, तिमीहरू पनि देख्दैछौ । यी यस्ता अवस्थामा छन्, जसले हल्लाउँछ, भावना जगाउँछ, तर यिनको व्याख्या गर्न सकिंँदैन ।’ द इकोनोमिस्टका समीक्षक लेख्छन्, ‘यो कथिड्रलका गजुरहरू झर्दै गरेको देख्नु अत्यन्त चिमोट्ने विषय हो र यो अत्यन्त गहिरो मानवीय शोक हो, खासगरी यो एक्काइसौं शताब्दीमा ।’ तिनले एक्काइसौं शताब्दीे अनि मानवीय तत्त्व जोडेको अर्थपूर्ण छ । यो शताब्दी आरम्भदेखि नै ठिक बाटोमा मानवतालाई लाने किसिमको देखिँंदै छैन ।
ती भन्छन्, ‘भवनभन्दा पनि त्यसलाई गुमाउनुले जगाएका भावना र पीडा बलिया छन् । नोत्रदाम मानिसहरूको सामुहिक उच्चताको अभिव्यक्ति हो ।’ ती थप्छन्, ‘माथि सिलिङतिर हेर । ती अज्ञात हजारौं प्रतिभाशाली कलाकार र शिल्पीहरूले डेढ सय वर्ष लगाएर हाते छिना चलाएर बनाएका यी सूक्ष्म महान निर्माण शिल्पका रचना गर्नेहरूको सिर्जनात्मक सामर्थ्यको प्रशंसा नगरी को बस्न सक्ला र ?’ उनले यसमा इतिहास यसरी जोडेका छन्, ‘यो कथिड्रलले ८५० वर्षमा देखेका राजनीतिक उथल–पुथल, युद्ध, क्रान्ति, नाजीको आधिपत्यलाई लिएर हेर्दा यसले विगत र वर्तमानलाई कसरी जोडेको छ भन्न सकिन्छ ।’ मलाई यो भनाइले धेरै छोएको छ । ती लेख्छन्, ‘त्यो आगोले मानिसलाई जोड्छ ।’ अनि म आफैंतिर फर्केर सोध्छु, हामीलाई हाम्रा भूकम्पमा विनाश भएका सम्पदाका पीडाले जोडेका छन् त ? कति जोडेका छन् ?
नोत्रदाम एउटा आफ्नै परिवेशको कलाको भयानक उपस्थिति पनि होइन । तर यो यस्तो उपस्थिति हो, जसबारे थाहा भएदेखि अरु धेरैले जस्तै मैले पनि आफूले मानव कला र काव्यजस्तो मानेर आएको हुँ । म यो गोथिक गिर्जाघरमा सन् २००० को मे महिनामा पहिलोचोटी पुग्दा एक सीमाहीन, स्वतन्त्र अनि एउटा मानव कला विषयको फ्रिक भएर पसेको थिएँ । त्यहाँ पुगेपछि मलाई लाग्यो, म आफूले पढेका पश्चिमी संस्कृतिका पाठहरू, सुनेका ब्यारोक संगीत र देखेका चित्र र वास्तुकलालाई एउटा शान्त परिवेशमा हेरिरहेको थिएँ । मध्ययुगिन रंगिन ग्लासहरूबाट परम सुन्दर उज्यालो खसिरहेको थियो ।
मेडोनाले बालक क्राइस्टलाई बोकेको ‘नोत्रदाम द पारी’ भनिने अग्लो मूर्तिले मलाई यति धेरै समात्यो कि मैले त्यो चित्र पछि कला र चित्रहरूमा पनि पटक–पटक हेरिबसेँं । कञ्चनपुरकी बलात्कृत र हत्या गरिएकी बालिका निर्मला पन्तकी आमाले काठमाडौंमा भएको जुलुसमा बत्तीको शुभ्र उज्यालोमा मेडोनाले जस्तै बालिकाको फोटो बोकेको चिक्रले मलाई गहिरोगरी छोयो । मैले नोत्रदामकी मेडोनाले शिशु त्राइष्टलाई बोकेको त्यही मूर्ति सम्झेँं, अनि कान्तिपुरमा यस्तो लेखेँं, ‘भदौ २०७५ को अन्तिम हप्तामा काठमाडौंको सडकमा एउटा भयानक शक्तिशाली चित्र देखियो ।
कारुणिक, विद्रोही, भावात्मक र चेतनाको प्रवाह गराउने दृश्य थियो त्यो । एउटी आमाले आफ्नी बलात्कृत र हत्या गरिएकी बालिका छोरीको अबोध विम्ब छातीमा स्तनपान गराएर टाँसेको अनि त्यसलाई मैनबत्तीको शुभ्र उज्यालोमा आलोकित गरिएको जस्तो देखिने.....त्यो छवि रूपले मलाई बाह्रौं शताब्दीको प्यारिसको नोत्रदामको हलको दाहिनेपट्टि कुँदिएको मेडोनाले शिशु क्राइस्ट बोकेको विशाल मूर्ति र अरु ठाउँका यस्तै कलाकृतिहरूको सम्झना हुन्छ ।’ (असोज ६, २०७५)
मैले सबभन्दा पहिला यो नोत्रदामको विषयमा एउटा उपन्यासमा पढेको थिएँ, धेरै पहिले । फ्रान्सेली उपन्यासकार भिक्टर ह्युगो (सन् १८०२–१८८५) ले लेखेको, अंग्रेजीमा १८३३ मा अनुवाद भएको उपन्यास ‘द हन्चब्याक अफ नोत्र–दाम’ले यो कथिड्रलको मानवीय सम्बन्धमा रूपान्तरण गरेको छ । कुनै कलात्मक वा वास्तुकलासँग मानिसलाई जोडेर यसरी लेखेको सायद योभन्दा बलिया कृति होलान्, तर मैले पढ्न पाएको छैन । यो उपन्यासमा एउटा ढाडमा कुम्लो भएको कासिमोदो नामको गरिब केटाको मार्मिक कथा छ । नोत्रदाम गिर्जाको घन्टी बजाउने २० वर्षको यो कुम्ले आधी दृष्टि भएको र घन्टी बजाउँदा–बजाउँदै त्यति कान पनि नसुन्ने भएको छ ।
यो केटाको इस्मेराल्डा नाम भएकी यो उपन्यासकी नायिका १६ वर्षकी जिप्सी नर्तकीसँगको अनौठो सम्बन्ध हुन्छ र त्यो केटी मरेपछि यो केटा उसकै चिहानमा गएर उसलाई अंकमाल गर्दै त्यहीं भोकले मरेको कथा छ, यसमा । यो उपन्यासले एउटा गोथिक शैलीको विशाल गिर्जाघर र मानिसको सम्बन्धलाई जीवन्त चित्रण गरेको छ । मैले यो उपन्यासको विषयमा यति छलफल गर्नुको कारण अर्को छ । यो उपन्यास नेपालीमा अनुवाद गरिएको छ र यो पश्चिमी शास्त्रीय कृतिहरूमा सबभन्दा ठूलो अनुदित कृति हो ।
शारदा पत्रिकाका संस्थापक/प्रकाशक सुब्बा ऋद्धिबहादुर मल्ल (१९५५–२०२५) ले ‘न्याट्रिड्यामको कुम्भे’ शीर्षक राखेर नेपालीमा गरेको यो अनुवाद २०२५ सालमा प्रकाशित भएको हो । यसरी नोत्रदाम गिर्जाघरसँग नेपाली लेखक, कलाकारहरूको भावनात्मक सम्बन्ध कहीं न कहीं गाँसिएको देखिन्छ । नोत्रदाम जाने लेखकहरूमा लैनसिंह वाङ्देल र मानु दिदी अनि मैले थाहा पाएका लेखकहरूमा शेखर खरेल, अर्चना थापा, सञ्जीव उप्रेती छन् । नोत्रदामका सबभन्दा पछिल्ला चित्र र यसबारे बिजुली पत्र अलका आत्रेय चुडाल र बिन्दुले पठाएका हुन् । मैले जाने अनुसार नाट्यकर्मी पुष्कर गुरुङ, सुनील पोखरेल, सुवर्ण थापा नोत्रदाम गएका छन् । अरु गएका लेखकहरू सबै अहिले भावातित भएका होलान् ।
हाम्रोतिर पनि यस्ता सम्पदामाथि कथा लेखिएका अनि फिल्म बनेका छन् । महाभूकम्पले यस्ता सांस्कृतिक सम्पदा क्षतिग्रस्त भएपछि हामीलाई एउटा प्रश्नले निकै हल्लाएको छ । त्यो हो, हामी यति धेरै वास्तु रचना र सम्पदा भएका मानिसका तीसँग जोडिएका जीवनका कथा छैनन् त ? ह्युगोको स्थुल उपन्यासजस्ता महाकाव्यिक चरित्रका वर्णन छैनन् त ? मलाई लाग्छ, छैनन् । तर ती परिवेशसँग जोडिएका रङ्गमञ्च र नाटकहरू भने थिए, जुन जनमानसमा पढिने र सहजै प्रयोग हुने रूपमा छैनन् । हाम्रा सम्पदाहरूले राजनीतिक र शक्तिका परिवर्तन देखे, तर ती प्रभावित भएनन्, किनभने ती इतिहासका सोझै संवेद्य भएनन् । भूकम्पपछिको नेपालमा यो अवस्थाको राम्ररी बोध भइरहेको छ ।
नोत्रदामको दुर्घटनाले दुःखित भएका मानिस विश्वभरि नै देखिए । मूल खण्ड वा आत्मा बँचेको छ, अब यसैबाट यसको पुनर्निर्माण गर्छौं, हामीलाई आगोले जोडेको छ भन्नेहरूका उदात्त प्रतिज्ञा सुनेर मलाई कवि नाटककार बालकृष्ण समको कविता ‘आगो र पानी’को सम्झना भएको छ, जसको सार हो, जीवन आगो र पानीको ‘सिम्फोनी’ हो, जसको लय शाश्वत छ ।
प्रकाशित : वैशाख ७, २०७६ ०८:११